U soo dir Email Via SMTP ee WordPress oo leh Google Workspace iyo Xaqiijinta Laba-Sababood | Martech Zone
Talaado, Janaayo 26, 2021 Khamiis, Agoosto 12, 2021 Douglas Karr
Waxaan ahay taageere weyn Labo Aqoonsi Aasaas ah (2FA) madal kasta oo aan ordayo. Aniga oo ah suuq ilaaliye lashaqeynaya macaamiisha iyo xogta macmiilka, si fudud ugama taxadari karo amniga sidaa darteed isku darka furayaasha ereyada kaladuwan ee bog kasta, adoo adeegsanaya Apple Keychain oo ah keyd sir ah, iyo awood u siinta 2FA adeeg walba waa waajib.
Hadaad ordeyso WordPress maaddaama nidaamkaaga maaraynta maaddada, nidaamka sida caadiga ah loo qaabeeyey inuu riixo farriimaha emaylka (sida fariimaha nidaamka, xusuusinta ereyga, iwm.) Iyadoo loo marayo martidaada. Si kastaba ha noqotee, tani maahan xal lagu talin karo dhowr sababood awgood:
Qaar ka mid ah martigaliyayaasha ayaa dhab ahaantii xakameynaya awoodda ay uga soo diri karaan emayllada ka baxsan server-ka si aysan bartilmaameed u ahayn haakarisyadu inay ku daraan khayaanada emaylka diraya
E-maylka ka imanaya adeegahaaga caadi ahaan lama xaqiijin oo laguma ansaxiyo hababka aqoonsiga gudbinta emaylka sida SPF ama DKIM. Taasi waxay ka dhigan tahay emaylladani in si toos ah loogu gudbin karo galka qashinka.
Ma lihid diiwaanka dhammaan e-mayllada dibedda ka baxa ee laga riixayo serverkaaga. Adigoo ku diraya iyaga koontadaada Google Workspace (Gmail), dhammaantood waxaad ku dhex ridi doontaa galkaaga la soo diray - si aad dib ugu eegi karto farriimaha boggaagu dirayo.
Xalka, dabcan, waa in la rakibo shey SMTP ah oo emaylkaaga u diraya koontadaada Google Workspace halkii laga riixi lahaa serverkaaga.
Ma rabtaa inaad sameysato Microsoft Halkii? Guji Halkaan
Liistadeena plug-ka WordPress ugu wanaagsan, waxaan ku taxnaa SMTP WP fudud plugin u xallin u ah isku xirka boggaaga WordPress iyo serverka SMTP si loo xaqiijiyo loona diro emayllada baxaya. Way fududahay in la isticmaalo oo xitaa ay ku jirto tabkeeda tijaabada ah ee dirista emaylka!
Dejinta loogu talagalay Goobta Shaqada Google waa quruxsan fudud:
Dekedda SSL: 465
Waa tan sida ay umuuqato (Ma soo bandhigayo meelaha loo adeegsado magaca iyo lambarka sirta ah):
Labo Aqoonsi Aasaas ah
Dhibaatadu hadda waa xaqiijin. Haddii aad awood u leedahay 2FA koontadaada Google, kaliya ma geli kartid magacaaga (cinwaanka iimaylka) iyo lambarka sirta ah ee ku jira kumbuyuutarka. Waxaad heli doontaa qalad markaad tijaabiso taas oo kuu sheegaysa inaad u baahan tahay 2FA si aad u dhammaystirto xaqiijinta adeegga Google.
Si kastaba ha noqotee, Google waxay xal u haysaa tan… loo yaqaan Furaha App-ka.
Fureyaasha Google Workspace App
Google Workspace waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid ereyada sirta ah ee aan u baahnayn aqoonsi laba qodob ah. Waxay asal ahaan yihiin hal erey oo keliya oo ujeedo ah oo aad u adeegsan karto macaamiisha emaylka ama aalado kale oo dhinac saddexaad ah… kiiskan boggaaga WordPress.
Si loogu daro Password-ka App-ka Goobta Shaqada:
Galitaankaaga Koontada Google.
Under Kusoo galida Google, dooro Furaha App-ka.
Dooro kale, oo qor magaca boggaaga oo soo saar eray sir ah.
Google waxay awood u siineysaa furaha sirta waana ku siineysaa si aad ugu adeegsato xaqiijinta.
Tags: 2faGmaillambarka sirta ah ee googleboostada googlegoobta shaqada googlegsuiteSMTPplugin smtpsugida laba-factorWordPressplugin WordPress